FB-Post « MMWeather Information BLOG
By mmweather.ygn, on August 11th, 2012%
by ကို သာ ပို on Saturday, August 11, 2012 at 2:02pm ·
သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (၃) မှ အဆက်…
သဲအိတ်များကို ရေတိုက်စားခြင်း လှိုင်းပုတ်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ရလေအောင် ရေတိုးရာ ရေဦးတိုက် နေရာများတွင် အောက်ဖော်ပြပါ ပုံကဲ့သို့ သေသေချာချာ ကာကွယ်နိုင်သော အကာအရံများ ထပ်မံဖြည့်သွင်း တည်ဆောက် ထားသင့်ပါသေးသည်။ ထိုသို့ တည်ဆောက်ရာတွင် ခိုင်ခံသော သစ်သားများကို အသုံးပြုပြီး အခြေကိုလဲ ရေတိုက်စားခြင်း မရှိရလေအောင် သေသေချာချာ စီမံပြုလုပ် အသုံးပြုသင့်ပါသည်။
ထပ်မံ၍ သဲအိတ်များ စီရာတွင် ရှောင်ရှားသင့်သည်များ၊ ဖြစ်တတ်သည့် အမှားများနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် . . . → Read More: သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (အဆုံး)
Leaveacomment ဆောင်းပါး, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း FB-Post သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (၃)
ပလပ်စတစ်အစကို ရေလာရာဘက် . . . → Read More: သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (၃)
Leaveacomment ဆောင်းပါး, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း FB-Post သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (၂)
by ကို သာ ပို on Saturday, August 11, 2012 at 7:57am · ၏ Facebook Note မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်။
သဲအိတ်တွေကို စီတဲ့နေရာမှာ သဲအိတ်တွေကို အချင်းချင်း ထပ်တဲ့နေရာဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သဲအိတ်တွေကို တစ်ဝက်၊ ဒါမှမဟုတ် သုံးပုံ နှစ်ပုံပဲ ထည့်ထားတဲ့အတွက် သံအိတ်တွေမှာ သဲမရှိတဲ့ အပိုင်းတွေ ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒိ သဲလွတ်နေတဲ့ အိတ်ခွံအပိုင်းကို . . . → Read More: သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (၂)
Leaveacomment ဆောင်းပါး, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း FB-Post သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (၁)
by ကို သာ ပို on Friday, August 10, 2012 at 11:46pm · ၏ Facebook Note မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်။
ဒီလိုအချိန်မှာ အရင်တုန်းက NGO တစ်ခုမှာ လုပ်တုန်းက ရေကြီးရင် အရေးပေါ် သဲအိတ်တွေ နဲ့ကာကွယ်ရမယ့် . . . → Read More: သဲအိတ်နဲ့ ရေကြီးတာကို ကာကွယ်ကြမယ် (၁)
Leaveacomment ဆောင်းပါး, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း FB-Post Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum